सुनौलो बिहानी ।। Sunaulo Bihani » स्वास्थ्य/जीवनशैली
भुटेको लसुन खानुको फाइदा..,यस्तो लसुन खानाले निको पार्छ यी रोगहरु !
लसुन*को प्रयोग ले खाने कुराको स्वाद लाई बढाउँछ । स्वास्थको लागि निकै फाइदा जनक रहेको लसुन काँचो भन्दा बढी भुटेको खानु*मा धेरै फाइदा हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । विशेष गरेर भुटेको लसुन पुरुष हरुको लागि लाभदायक रहेको हुन्छ । यस्तै आज हामी तपाई हरु*लाई भुटेको लसुन खाँदा कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने बारे बताउन गइरहेका.....
भण्टा खाने गर्नु भएको छ भने जानकारी का लागि यो पढ्नुहोला…
काठमाडौं : भन्टा हेर्दा आकर्षक देखिने गर्छ । गर्मीको समयमा पाइने तराकारीहरु मध्ये यो पनि एक हो । यो खानको लागी पनि निकै स्वादिलो हुन्छ । यस*लाई हामी तरकारी को रुपमा वा कहिले*काँही अचारको रुपमा पनि खाने गर्छौं । भन्टा जति स्वादिलो छ । यसमा पाइने पौष्टिक तत्वहरु हाम्रो स्वास्थ्यको लागी त्योभन्दा बढी लाभदायक.....
निगुरो खानुको फाइदा..,के हुन्छ त निगुरोमा !
यतिबेला हाम्रा बन जंगलहरुमा च्याउ, निगुरो पाइन्छ । कतिपयले जंगल*बाट खोजेरै तरकारीको छाक टार्ने गर्छन् । कतिपयले निउरो, च्याउ बेचेर पैसाको जोहो पनि गर्छन् । निउरो रोप्न पर्दैन । बनजंगल*मा आफै पलाउँछ । यो उन्यु प्रजातिको घाँस हो । पहाड र तराई सबैतिरको जंगलमा निउरोे पाइन्छ । तर, यसको जातमा केही भिन्नता हुन्छ.....
पहाडी जंगलमा पाइने काफलका औषधीय गुणहरू..,काफल खानुको फाइदा !
यो गर्मी याममा पहाड*का वन पाखाहरूमा पाकेको हुन्छ । यसको फलको आकार लाम्चो र गोलो आकारको हुन्छ। यसको स्वाद अमिलो मिठो हुन्छ। यसको फलको रंग काँचोमा हरियो हुन्छ । पाकि सके पछी रातो र धेरै पाके पछि बैजनी रंगको हुन्छ । पहाड तिरका मानिस हरू गर्मी याममा काफल*को रूखमा चढेर काफल खानमा तल्लिन रहन्छन् । काफल लाई हामीले.....
तीते करेला खाएको हप्तामै रोग*हरु निको पार्छ !
थाहा पाउनुस् करेलाका फाइदाहरु - – खानामा रुचि बढाउँछ । – छालाको सङ्क्रमण, चिलाउने खटिरा, घाउ आदिलाई हटाउँछ । – खाएको कुरा राम्ररी पचाउँछ । – पेटसफा राख्दछ । – कब्जियत हुन दिँदैन । – पेटसम्बन्धी विभिन्न रोगजस्तै, ग्या*ष्ट्रिक, अल्सर आदिलाई कम गर्दै लैजान्छ । – रगत शुद्धीकरण गरी सफा राख्न मद्दत गर्छ । –.....
यो सानो मरिच ले यति धेरै रोग हटाउन गर्छ फाइदा…
काठमाडौं : जाडो समयमा कालो मरिच8को चिया पिउँदा शरीर लाई फाइदा हुन्छ । मसला*का रुपमा प्रयोग हुने मरिच औषधि पनि हो ।मरिच लाई खानेकुरा स्वादिष्ट बनाउन प्रयोग गरिन्छ । पिरो स्वादमा हुने कालो मरिच खाने कुरासँगै चियामा समेत हालिन्छ । कालो मरिच स्वादका लागि मात्र नभएर घरेलु औषधिका रूपमा समेत प्रयोगमा आउँछ । पेट,.....
प्रकृतिको एउटा बरदान हो ‘सिस्नु’ जसले च्वाट्टै पार्छ यी रोगहरु..,खाने हैन त
हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, साग र सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले’ महाकवि लक्ष्मी*प्रसाद देवकोटाका यी पंक्तिमा मात्रै सीमित रहेन अहिले सिस्नोको चर्चा । कुनै बेला गाउँघरमा दुई छाक खानाको जोहो गर्न नसक्नेहरूले समेत तुच्छ खानाको रूपमा लिने गरेको सिस्नो अहिले शहरका ठूला–ठूला डिपार्टमेण्ट स्टोर, तारे.....
फर्सीको मुन्टा खानुका फाइदा !
हरियो सागपात मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । अझ हरियो साग खानाले आँखा तेजिलो हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । हरियो सागसब्जीमध्ये फर्सी*को मुन्टामा अझ विशेष गुण हुन्छ । जुन मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी हुन्छ । फर्सीको पात वा मुन्टा खानाले हामी विभिन्न रोगबाट जोगिन सक्छौँ । फर्सीको पातको.....
हरियो खुर्सानी दैनिक सेवन गर्दा सुगर नियन्त्रण
काठमाडौं ; खाना को स्वाद बढाउन हरियो खुर्सानी प्रयोग गर्ने गरिन्छ । भिटामिन ए, बी–६, आइरन, पोटासियम, प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेड प्रशस्त मात्रा मा पाइने हरियो खुर्सानी अब स्वाद*को लागि मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि पनि महत्वपूर्ण गुणले भरिपूर्ण रहेको एक अनुसन्धान ले देखाएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेक समस्या.....
बिरेनुन ग्यास्ट्रिकको लागि औषधि..,यी रोगहरुबाट नि टाढा हुन्छ सधै सेवन गदा !
यो बिरेनुन विभिन्न खालको रोगमा घरेलु उपचारको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आयुर्वेदमा त यसको धेरै औषधि*हरुमा प्रयोग हुन्छ । सेतो नुनको सट्टा थोरै मात्रामा बिरेनुन*को प्रयोग गर्न सकियो भने यसले फाइदा पुग्छ । बिरेनुन प्राकृतिक नुन हो । यो हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा डाँडापहरा बाट निकालिन्छ । बिरेनुन*को नियमित.....